About Us - Ningbo Yinzhou Nuoya simenitra Block Machine Factory
Ny orinasa dia maneho ny soatoavina kolontsaina ny zava-baovao, preciseness, fahadiovam-po, fitrandrahana.
Innovation-dia hery fiara Nuoya mba hananana. Ny fanalahidin 'ny fahombiazana ny mbola ho foana fampandrosoana ny hevi-baovao sy ny hevitra. Manaraka foana izahay hametraka mitovy zava-dehibe amin'ny fitantanana sy ny kolontsaina roa. Ny orinasa fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny marika rehetra ao amin'ny dingana mitohy zava-baovao.
Preciseness-dia toetra tontolo Nuoya teknolojia. Mifikitra mafy izahay, ary mafy ny fitsipiky ny "olona-mifantoka ka mitroka, fomba tsy manam-paharoa", no namorona ny toetra manokana ny rafi-kolontsaina. Toy ny taloha hoe mandeha, "dia ny lava indrindra manomboka amin'ny dingana iray", araka ny hery notsoahina tsipiriany rehetra, avy amin'ny tahiry ara-nofo mangenahena, fikarakarana fiangonana debugging sy ny fanamarinana, hentitra araka ny orinasa mpamokatra entana mandray ny fepetra takiana. Ny mivarotra vokatra tsara manerana izao tontolo izao, indrindra fa any Afrika, Afovoany Atsinanana sy Azia, nankafy tsara laza.
Fahadiovam-po-dia vato fototry ny fampandrosoana maharitra. Tsara dia tsara dia tsara ny finoana sisa fomban-drazana avy amin'ny fotoana taloha ny amin'izao fotoana izao ary na dia bebe kokoa ny fototry ny fampandrosoana maharitra ny orinasa. Customer matoky sy fahafaham-po lehibe indrindra dia ny aingam-panahy. Ho conciliate malalaka mpanjifa ny matoky sy manohana miaraka amin'ny kalitao sy ny vokatra tsara kalitao avo fanompoana.
Exploration-hanitatra ny lalan'i Nuoya. Mitohy amin'ny alalan'ny fianarana sy fiofanana mba hanatsara ny tenany, hampiroborobo Nuoya fifaninanana sy hampiroborobo ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ny zavatra manome ny tsara indrindra sy ny asa ho an'ny mpanjifa toetra.
Ny orinasa tsara ny kolontsaina mahatonga antsika Nifanesy koa ny ezaka ary lasa ny vato fehizoro ny orinasa mba hanohanana ny fifadian-kanina fampandrosoana maharitra amin'ny ho avy.